I-Uniswap (UNIUSD) Ixabiso: Iibhere ziPhambili, Inqanaba lenkxaso ye-17 yeedola linokuthi livavanywe
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap – nge-18 kaNovemba
Uxinzelelo olungakumbi oluvela kwiibhere luya kutyhala ingqekembe ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-17 yeedola, ngaphantsi kwayo yi-14 yenqanaba lokuxhasa. Amanqanaba okumelana ngaphezu kwexabiso langoku afumaneka kwi-$ 24, i-$ 27 kunye ne-$ 30.
I-Uniswap ikwintshukumo ye-bearish kwimbono yexesha elide. Ingqekembe yayikwintshukumo ejikelezayo ngaphakathi kweedola ezingama-27 kunye namanqanaba angama-24 eveki ephelileyo. Abathengisi ekugqibeleni baphumelela ngoNovemba 16 xa kwavela ikhandlela elinamandla le-bearish yemihla ngemihla. Inqanaba lenkxaso ye-24 yeedola lingene kwaye ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-21 yeedola. Okwangoku, abathengisi bazama ukutyhala ixabiso elingaphantsi kwinqanaba lenkxaso ye-21 yeedola.
Uniswap itshathi yemihla ngemihla, ngoNovemba 18
Uniswap uye wawela ii-EMA ezimbini ezantsi, amaxesha angama-9 EMA angaphantsi kwamaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwe-bearish trend. Ixabiso lirhweba ngaphantsi kwee-EMA ezimbini. Uxinzelelo olungakumbi oluvela kwiibhere luya kutyhala ingqekembe ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-17 yeedola, ngaphantsi kwayo yi-14 yenqanaba lokuxhasa. Amanqanaba okumelana ngaphezu kwexabiso langoku afumaneka kwi-$ 24, i-$ 27 kunye ne-$ 30. I-Relative Strength Index ikumanqanaba angama-20 abonisa i-bearish direction trade.
Uniswap ukwi-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Ukunyuka kwesantya seebhere kunye nenqanaba lenkxaso ye-24 yeedola alikwazanga ukubamba ixabiso. Uxinzelelo lwabathengisi lunamandla ngokwaneleyo ukudiliza inqanaba elikhankanywe. Ixabiso le-Uniswap liyancipha kwaye livavanye izinga lenkxaso ye-21 yeedola. Okunye ukuhla kwexabiso kunokwenzeka.
Uniswap itshathi yeeyure ezi-4, ngoNovemba 18
I-Uniswap ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla e-14 likumanqanaba angama-30 e-$ abonisa ulwalathiso lwe-bearish.
Ixabiso le-Uniswap (UNIUSD) liqhubela phambili ngokutshintshana phakathi kwe-$27 kunye ne-$21 yamanqanaba
Uhlalutyo lwexabiso le-Uniswap – nge-11 kaNovemba
Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zifumana uxinzelelo olungakumbi lokuqhawula umgangatho wokumelana ne-$ 27, ixabiso linokunyusa ukuvavanya umgangatho wokumelana ne-$ 30, inokwandisa ngokulinganayo kwizinga le-$ 37. Ngaba iibhere ziyakwandisa uxinzelelo lokungena kwinqanaba lenkxaso ye-24 ye-downside, i-Uniswap ixabiso lingawela kwi-$ 17 kunye ne-14 yexabiso lexabiso.
Amanqanaba enkxaso: $ 24, $ 21, $ 17
Uniswap ikwimowudi eqalayo kwimbonakalo yexesha elide. Abathengi baqhubeka betyhala i-Uniswap ukuvavanya inqanaba lokuchasana le-$ 27 imihla ngemihla kodwa izinga lokumelana ne-$ 27 libambe ixabiso. Oko kuthetha ukuba uxinzelelo lwabathengi lubuthathaka kwaye alukwazi ukwaphula inqanaba lexabiso le-27 yeedola. Umfutho weebhere ubonakala uphantsi kwaye awukwazanga ukuphula inqanaba lenkxaso ye-21 yeedola. Ixabiso ligcina intshukumo yalo phakathi kwe-$ 27 kunye ne-$ 24 amanqanaba exabiso.
Itshathi yosuku lwe-UNIUSD, ngoNovemba 11
Urhwebo olujikelezayo nangaphaya kwee-EMA ezimbini ngu-Uniswap luyaqhubeka olubonisa ukuguquguquka, kunye nomyinge ohamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9 EMA) ahlala enxibelelene nomndilili ohamba kancinci (amaxesha angama-21 EMA). Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zifumana uxinzelelo olungakumbi lokuqhawula umgangatho wokumelana ne-$ 27, ixabiso linokunyusa ukuvavanya umgangatho wokumelana ne-$ 30, inokwandisa ngokulinganayo kwizinga le-$ 37. Ngaba iibhere ziyakwandisa uxinzelelo lokungena kwinqanaba lenkxaso ye-24 ye-downside, i-Uniswap ixabiso lingawela kwi-$ 17 kunye ne-14 yexabiso lexabiso. I-Relative Strength Index ikumanqanaba angama-50 ebonisa ukuba akukho sikhokelo sithe ngqo sorhwebo.
Uniswap isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Umfutho weebhere uhlala njengoko inqanaba lenkxaso ye-24 yeedola libamba ixabiso. Uxinzelelo lwabathengisi alunamandla ngokwaneleyo ukuba aphule inqanaba elikhankanywe. Ngexesha elifanayo inqanaba lokumelana ne-27 yeedola libonakala linamandla kune-bullish. Uniswap uyaqhubeka nentshukumo yokuqinisa kude kubekho ukuqhawuka.
I-UNIUSD itshathi yeyure ezi-4, ngoNovemba 11
U-Uniswap ujikeleza phezu kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ixesha lesalathiso samandla esinxulumene ne-14 lingaphantsi kwamanqanaba angama-50 abonisa ukuba akukho lwalathiso luthile.
14 October 2021 | Ukuhlaziywa: 14 October 2021